မဘသ . ၉၆၉ .. ဘယ်လိုအမျိုးချစ်မှာလဲ ? | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« မျိုးချစ်စိတ်ဓါတ်နှင့်ယှဉ်တွဲ၍ အသိဥာဏ်ဆင်ခြင်တုံ တရားရှိရပေမည်.
U Thein Than Oo သောင်းတိုက်ကကြားစေသား၂၄ »
မဘသ . ၉၆၉ .. ဘယ်လိုအမျိုးချစ်မှာလဲ ?
လက်ပံတောင်းပြသာနာ ဟာ တစတစနဲ့ လူသတ် တဲ့အဆင့် ထိ တိုးမြှင့်လုပ်ဆောင် လာပါပြီ။
တရုတ်ကွန်မြူနစ်အစိုးရကတော့ ဝတ်ကျေတန်းကျေ ဝမ်းနည်းကြောင်းသတင်း ထုတ်ပြန်လိုက် တယ်လို့သိရပါတယ်။ စစ်အစိုးရပိုင် ဦးပိုင်နဲ့ တရုတ်ကွန်မြူနစ်အစိုးရ
လက်အောက်ခံ လက်နက်ထုတ်နေတဲ့ကုမ္မဏီတခုရဲ့ လက်ခွဲကုမ္မဏီတခုဖြစ်တဲ့ ဝမ်ပေါင် ကုမ္မဏီတို့အကျိုးတူလုပ်ကိုင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်မြန်မာပြည်သူလူထု
ဆန္ဒပြတဲ့ရဟန်းသံဃာတော် တွေကို မီးလောင်ဗုံးနဲ့ ပစ်ခဲ့
လို့ ရဟန်းသံဃာတော်တွေမီးသင်္ကန်းနဲ့ပူဇော်တာကိုခံခဲ့ရ ဘူးပါတယ်။
ဘုန်းကြီးအချင်းချင်းတောင် မကာကွယ်နိူင်တာကို တွေ့မြင်ခဲ့ရပါတယ်။
တနေ့ကမှပူပူနွေးနွေးဖြစ်ခဲ့တဲ့ပဋိပက္ခ မှာတော့ ဒေသခံ
မှန်ပြီးဦးနှောက်ပွင့်ထွက်ကာ သေဆုံးခဲ့ရသလို ဒေသခံ
တောင်သူအများအပြားလဲ ပြင်းထန်စွာထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရခဲ့ပါတယ်။
ယခုပဋိပက္ခ မှာ ယခင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ပြသာနာနဲ့မတူပဲ
ဝမ်ပေါင်ကုမ္မဏီရဲ့ ( တယုတ် )လူမျိုးတွေကိုယ်တိုင်ပါဝင်
ဒီဖြစ်စဉ် ကို ဘာမှမသိသလိုမကြားသလိုမျက်ကွယ်ပြုနေ
တာကတော့ အမျိုးဘာသာ သာသနာ ကို ကာကွယ်မယ်
ဆိုတဲ့သည်းခြေကြိုက် စကားလုံးနဲ့အဖွဲ့ကြီးဖြစ်တဲ့ ( မဘသ ) လို့ခေါ်တဲ့ ၉၆၉ အဖွဲ့ကြီးပါ။
ပြည်ပ နိူင်ငံခြားသားဖြစ်တဲ့ ( တယုတ် )တွေကိုယ်တိုင်
ဝင်ရောက်ရိုက်နှက်နေတာကိုသိနေပါရက်နဲ့မိမိအဖွဲ့အစည်း ရဲ့နာမည်နဲ့အညီ အမျိုးကိုလဲမကာကွယ်နိူင်တာ ဘာကြောင့်
ဖို့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့.. ( ၉၆၉ တဖြစ်လဲ မဘသ ) အဖွဲ့ဖြစ်တယ်
ဆိုတာ ငြင်းချက်ထုတ်မရအောင် သေချာနေပါပြီ ။
ကျနော်ဒီပို့စ် တင်ချိန်ထိ ၉၆၉ .မဘသ ဟာ မျက်စိမှိတ်.
ပါးစပ်ပိတ်.နားပိတ်..နေတာက ငြင်းမရတဲ့ သက်သေတခု
လက်ရှိ အရပ်သားအရေခြုံ စစ်အာဏာရှင်ဦးသိန်းစိန်အစိုး
ရ အဖွဲ့ရဲ့ပြောခွင့်ရသူတွေရဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာတော့
နိူင်ငံတကာရဲ့စံနှုန်းနဲ့အညီ ရော်ဘာကျည် နဲ့ပစ်ခတ်လူစု
ခွဲတာပါလို့ပြောဆိုပေမဲ့ သေဆုံးသူ ဒေါ်ခင်ဝင်းရဲ့ ဦးနှောက်
ဟာ ရော်ဘာကျည်ဆံလား ? တကဲ့ကျည်ဆံအစစ်လား ?
စစ်မှန်တဲ့ ဗုဒ္ဓသားတော်စစ်စစ်များဟာ ပြည်သူလူထုရဲ့
အလဲ နဲ့ ပြည်သူလူထုကြည်ညိုလေးစားတဲ့လူထုခေါင်း
လေးစားတဲ့ခေါင်းဆောင်ကို တိုက်ခိုက်တာဟာ ပြည်သူ
၉၆၉ တဖြစ်လဲ မဘသ ဟာ ဒေါ်စု ကိုဝေဖန်လေကန်တတ်
ရုံ .. ပြည်သူအားထားယုံကြည်တဲ့- NLD- ကို တိုက်ခိုက်
တတ်ရုံအသိဥာဏ်ပညာလောက်နဲ့တော့ အမျိုး ကို ကာ
မှာ နိူင်ငံခြားသား ( တယုတ် ) တွေကိုယ်တိုင်ဝင်ရောက်
ရိုက်နှက်နေတာကို ၉၆၉ တဖြစ်လဲ မဘသ .ဟာ ဘာမှ
ကို မကာကွယ်နိူင်ဘူးဆိုတာ လယ်ပြင်မှာဆင်သွားသလို
ထင်ရှားနေတာမို့… ၉၆၉ တဖြစ်လဲ မဘသ ဘယ်လို
အမျိုးချစ်မှာလဲ… ? လို့ဒီနေရာကနေ ရိုးသားစွာမေးခွန်း
This entry was posted on December 26, 2014 at 12:53 pm and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.
4 Responses to “မဘသ . ၉၆၉ .. ဘယ်လိုအမျိုးချစ်မှာလဲ ?”
December 26, 2014 at 12:55 pm | Reply
မျိုးညစ် တစ်သိုက်နဲ့ ကြေးစားအမျိုး
သားရေးတစ်သိုက်ရဲ့ အမျိုး ဘာသာ
ဆရာထင်လင်းဦး ကိစ္စ မှာ ချောင်းဦး
မဘသ အမည်ခံ တွေဟာ
ပျောက် ငှက်ပျောက် ပျောက်နေကြတယ်။
လက်နက် နဲ့ နှိမ်နင်းတာကို မှန်ကန်တဲ့
သာအေး နဲ့ ဝပ်ပေါင်က ပါ သူတို့လုပ်ရပ်
ခဏ ခဏ ဒီကိစ္စဒေါ်စုကို တာဝန်ပေးထား
NLD နဲ့ အမေစုကိုတိုက်ခိုက်နိင်မှ
မျိုးညစ် နဲ့ ကြေးစားလော်ဘီအမျိုးသားရေး
မဘသ တွေဟာ လက်ပန်တောင်းတောင်
ထို့ကြောင့် လက်ရှိ မဘသ
NLD နှင့် အမေစုအပေါ် ဘယ်လို
December 26, 2014 at 1:53 pm | Reply
ရွှေဝါရောင် သံဃာ့ ကွန်ယက် ( အထက်မြန်မာပြည် )
ကြေငြာချက် ( ၁/၂၀၁၄ ) …. ရက်စွဲ ၂၆၊ ၁၂၊ ၂၀၁၄
လက်ပန်တောင်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်းသည် ပွင့်လင်းမြင်သာမှု မရှိခဲံသော ပြည်သူများ၏ သဘောတူညီမှု ရယူခဲ့ခြင်းမရှိခဲ့သော သဘာဝပတ်ဝန်ကျင် ထိခိုက်ပျက်စီးမှုများကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားမှု မရှိခဲ့သော စီမံကိန်းတခု ဖြစ်သည်။
ကြေးနီစီမံကိန်းအတွက် ပညာရှင်များ၏ ထောက်ပြဝေဖန်မှုများနှင့် လက်ပန်ဆောင်း ဒေသခံပြည်သူများ၏ ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြမှုများအပေါ် တွေ့ဆုံဖြေရှင်းသည့် နည်းလမ်းကို အသုံးမပြုဘဲ ပဋိပက္ခ ပိုမိုကြီးထွားလာအောင် အားကြီးသူ အနိုင်ရစတမ်း ပုံစံဖြင့် အစိုးရမှ ဇွတ်အတင်း ရှေ့တိုး ဆက်လက် လုပ်ဆောင်နေခြင်းများကို ကန့်ကွက် ရှုတ်ချသည်။
အဆင်အခြင်မဲ့သော အစိုးရ၏ ညွှန်ကြားချက်များကြောင့် ပဋိပက္ခများ ဖြစ်ပေါ်ကာ
၂၂.၁၂.၂၀၁၄ ရက်နေ့တွက် ပြည်သူတဦးဖြစ်သော ဒေါ်ခင်ဝင်း သေဆုံးခဲ့ရခြင်း ၊
၂၂.၁၂.၂၀၁၄ နှင့် ၂၃.၁၂.၂၀၁၄ ရက်နေ့များတွင် ပြည်သူအများအပြား ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရရှိခဲ့ခြင်းများအတွက် ဦးသိန်းစိန် အစိုးရတွင်သာ လုံးဝ တာဝန် ရှိသည်ဟု ကြေငြာသည်။
ပုဒ်မ ၄၃၆ ပြင်ဆင်ရေး ၊ လူလိမ်သူခိုးများ ဖော်ထုတ်ရေး၊ ပြည်တွင်း ငြိမ်းချမ်ှးု တည်ဆောက်ရေး စသည့် အရေးများကဲ့သို့ပင် ကြေးနီစီမံကိန်းအရေးသည် တိုင်းရင်းသား ပြည်သူတရပ်လုံးနှင့် သက်ဆိုင်သည့် အရေးဖြစ်ကြောင်း မှတ်ယူသည်။
လက်ပန်တောင်းတောင် သတင်းများကို လုပ်ကြံအသုံးချပြီး သွေးထိုးလှုံ့ဆော်မှုများ ပြုလုပ်ကာ လူမျိုးရေး ပဋိပက္ခများ ၊ ဘာသာရေး ပဋိပက္ခများ စသဖြင့် ဆူပူမှုများ ဖြစ်နေသယောင် ကောလဟာလများ ဖြန့်ချိ၍ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီအရေးကိုေ၀၀ါး လမ်းလွဲအောင် အကောက်ကြံမှုများကို ပြည်သူအများ သတိရှိကြစေရန် နှိုးဆော်လိုက်သည်။
December 27, 2014 at 12:33 pm | Reply
လမုကွန်ထိုးနဲ့ တူတဲ့ မ ဘ သ များ သမဂ္ဂများ
ဟိုတစ်နေ့က ဖြစ်ပျက်သွားတဲ့ ပြဿနာတွေကို
မကျေနပ်ကြလို့ မတရားဖိနှိပ်ခြင်းကို ခေါင်းငုံ့မခံတော့ပဲ
တစ်နိုင်ငံလုံးကို စစ်ဖိနပ်အောက်မှာ ပြားပြားဝပ်အောင်
နေရာအနှံ့ မြို့နယ်အနှံ့အပြားမှာ ထကြွ ဆန္ဒပြတာ
ကျွန်တော် ထူးဆန်းတယ်လို့ ပြောချင်တာက
ကိုပါကြီး ဗုဒ္ဓဘာသာလူမျိုးနော် ထေရဝါဒစစ်စစ်
နောက်တော့ လူမှန်တစ်ယောက် တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးကို
သူလည်း ရှု့ထောင့်တစ်နေရာကနေ ကြိုးစားရုန်းကန်
ပေးနေတဲ့သူ ဒီလိုလူကို စစ်တပ်က ရက်စက်စွာ
သေနတ်နဲ့ ပစ်သတ်တော့ အမှုမှန်ပေါ်ဖို့ဆိုပြီး
ကိုပါကြီး အလောင်းကို ဆေးရုံသယ်ဖို့ နိုင်ငံရေးတက်ကြွသူတွေ ကြိုးစားကြတယ်ဗျ……။
ဆေးရုံကို မသယ်ဖို့ မြို့နယ်ကို ဖြတ်သန်းခွင့်မပြုဘူးလို့
တားတဲ့ သူက အစိုးရမဟုတ်ပဲ နဲ့
မ ဘ သ ဘုန်းကြီးတွေ ဖြစ်နေတယ်……
ဗုဒ္ဓဘာသာပဲ ထေရဝါဒ စစ်စစ်ကြီး
မြန်မာလူမျိုးဗျ ရေတောင်မရောဘူး စစ်စစ်ကြီး……။
ဒေါ်ခင်ဝင်း ရဲက ပစ်သတ်လို့သေတဲ့အနေနဲ့
မ ဘ သ က အစိုးရကို ဝေဖန်သင့်တယ်
ဝမ်ပေါင် ကုမ္မဏီကို ရှုတ်ချသင့်တယ် မဟုတ်ဘူးလား။
ကြားလိုက်ရတဲ့ သတင်းက ထော်လော်ကန့်လန့်ဆို
တရုတ်ရဲ့ လုပ်ရပ်တွေကို မကြိုက်လို့
လယ်သိမ်းခံ မြေသိမ်းခံတွေ အေးအေးချမ်းချမ်း
ဆန္ဒမပြဖို့ ရဲနဲ့အတူ မ ဘ သ က ပူးပေါင်းပြီး
ဆန္ဒပြ ပြည်သူကို တားနေသတဲ့ အံ့ရော ဗျာ အံ့ရော…။
တဲ့သူ မရှိတော့ သလိုလို
မ ဘ သ လုပ်ရပ်တွေကျ ကြည့်ပါဦး
တရုတ်ကို ကာကွယ် အာဏာရှင်သက်ဆိုးရှည်ရေးလို့
ဒါမှ မဟုတ် ဒီလိုပြောင်းလိုက်
လမု ကွန်ထိုးနဲ့တူသော မ ဘ သ သမဂ္ဂ အဖွဲ့ ဆိုပြီး
တော့ ပြောင်းလိုက်လေ ဟုတ်ဘူးလား
Zarni Thway ရဲ့ ပို့စ်
December 27, 2014 at 1:05 pm | Reply
Dameio Ekoto with Maung Kaung Kyaw and 45 others
အရေခြုံနဲ့ သံဃာက တစ်ခြားစီ
စစ်ခွေးသား နဲ့ ဘုရားသားကို
ခွဲခွဲ ခြားခြား သိဖို့ လိုတယ် ။
သတ်နေတဲ့ အစိုးရကို တော်လှန်လို့
ဒကာ ဒကာမတွေရဲ့ ဆွမ်းတစ်နပ်စာ
ဘုန်းဘုန်း သတ်မှတ်တယ် ။ ။
အလင်္ကာကြယ် ( ပင်လယ် )
ကတုံး နဲ့ ဘုန်းဘုန်း ဘဲ
စစ်ခွေးသား နဲ့ ဘုရားသား